China Juda Kiln-Cross section of bottom of kuhhonela ifektri abakhiqizi | UJuda
Ukusebenza okuphezulu kwemishini
(1) Ukukhiqizwa okuphezulu kwansuku zonke (kufika kumathani angama-300 ngosuku);
(2) Umsebenzi womkhiqizo ophezulu (kufika ku-260 ~ 320 ml);
(3) Izinga lokusha eliphansi (≤10 amaphesenti;)
(4) Okuqukethwe okuzinzile kwe-calcium oxide (CaO≥90 ngamaphesenti);
(5) Ukusebenza okulula nokulawula kuhhavini (akukho ukudonsa, akukho ukuphambuka, akukho-cascade, akukho somlilo, indawo elinganiselayo yamalahle esithandweni somlilo)
(6) Ukuncishiswa kwenani likalamula odliwe ngumkhiqizo ngemuva kokusetshenziswa yibhizinisi (amaphesenti angama-30 wokwenza insimbi, ukukhipha isisu nokwenziwa kwe-slagging, amaphesenti angama-25 ngokukhiqizwa kwe-calcium hydrogen phosphate, amaphesenti angama-20 okukhiqizwa kwe-ferroalloy namaphesenti angama-20 wekhalsiyamu ukukhiqizwa kwe-carbide alumina);
(7) Isivuno esikhulu ngomkhiqizo weyunithi ngemuva kokwenza insimbi (umkhiqizo womkhiqizo ungakhushulwa ngaphezu kwe-1%);
(8) Ukungcola kokungcola okuphansi (ukukhishwa kwe-SO2 ngaphansi kwamazinga wokulawula kazwelonke);
(9) Imfucumfucu engasebenziseka, njengegesi kadoti nezinye izibi.
Inqubo yokukhiqiza izici:
1) uhlobo lomlilo lunengqondo, kusetshenziswa umumo wangaphakathi wevase Lo mklamo wenza umfaniswano wokusatshalaliswa komoya nezinto ezishisiwe ngokulinganayo, okungagcini nje ekwehliseni umfaniswano wento leyo, kepha futhi nokwanda okuqhubekayo kwendawo enqamulelayo, evumela ukushintshana kokushisa phakathi kwegesi okokusebenza, futhi kunikeza ukudlala okugcwele kumthelela wokushisa kabusha wokuhamba komoya etsheni. Nciphisa ukulahleka kokushisa. Ukushintshwa kobubanzi bomzimba kuhhavini kuyasiza ekushiseni izinto ezibonakalayo, ukushisa uphethiloli nokusetshenziswa kwamandla okushisa, kusheshisa ukubalwa kukalamula, ngaleyo ndlela kunciphise ukusetshenziswa kukaphethiloli, ukupholisa umcako ngokugcwele, ukunciphisa izinga lokushisa lomlotha nokubuyisa amandla okushisa. Nciphisa ukusetshenziswa kwamandla.
2), ukwamukelwa komthetho wokuhlinzekwa komoya, ingxenye engezansi iphoqelelwa yi-blower, ingxenye ephezulu i-annular flue kanye ne-gravity inertial dust collector, futhi i-fan eyenziwe kanye ne-chimney force isetshenzisiwe, engeyona kuphela evikela ukuvikelwa kwemvelo futhi ukususwa kothuli, kepha futhi kuvumelana nokwanda kwevolumu yomoya nokukhiphayo.
3) okonga ugesi kanye nokuvikelwa kwemvelo imishini esebenza ngomshini we-lime ilula futhi inokwethenjelwa, impilo ende, izindleko zokukhiqiza nezokugcina eziphansi.
Langaphambilini Umugqa wokukhiqiza we-Juda Calcium hydroxide (nge-slag discharge system) -IPC Project
Olandelayo: I-Kiln Body Steel Assembly
Ukulawulwa okuzenzakalelayo kwenhlangano
Isistimu yokulawula okuzenzakalelayo Kusuka ekubetheni kwe-elekthronikhi, ukuphakamisa, ukusabalalisa okuzenzakalelayo, ukulawula izinga lokushisa, ukucindezela komoya, ukubala i-lime, ukukhipha i-lime, ukuthumela, konke uhlelo lokulawula ikhompiyutha, kuhlanganiswe nesistimu yokulawula isikhombimsebenzisi somuntu kanye nohlelo olujwayelekile lokulawula ikhompyutha. isikhombimsebenzisi kanye nokusebenza okuvumelanisiwe kwesayithi, kune-fire lime endala ukusindisa ngaphezu kuka-50% womsebenzi, kuthuthukisa kakhulu ukusebenza kahle kokukhiqiza, ukunciphisa amandla okusebenza, ukwenza ngcono i-wor ...
Igama Lwebhizinisi LeCalcium oxide, Calcium oxide Futhi Calcium Hydroxide, Ukwenza i-Calcium Hydroxide, Ukwenza I-calcium Hydroxide, Izinsiza kusebenza zeCalcium Hydroxide Production Line, Izinsiza kusebenza zeCalcium Hydroxide,